समस्यामा नेपालमा रहेका विदेशी खेलाडी : खै निगरानी?
निको भएका २५६४६९३
अपडेटः आइतबार, जेठ १८, २०७७ । १६:३८ बजे । स्रोत : coronavirus.jhu.edu/map.html र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
सराेज तामाङ मंगलबार, वैशाख १६, २०७७, १३:५१
काठमाडौं- अहिलेको लकडाउनको अवस्थामा नेपाली खेलाडीले जसोतसो समय बिताइरहेको भए पनि खाने कुराकै मुस्किल भने उनीहरुलाई छैन। भर्खरै व्यावसायिक बनिरहेको नेपाली खेलकुदमा खेलाडीलाई परिवारको साथ पनि छँदैछ। तर नेपालमा रहेका विदेशी खेलाडीमा भने अहिलेको अवस्थाले समस्या पारेको छ।
बामे सर्दै गरेको नेपाली फुटबलमा थोरै भए पनि व्यावसायिकता देखिन्छ। टेलिभिजनका पर्दामा युरोपियन लिगको स्वाद लिइरहेका नेपाली दर्शकमध्ये केही नेपाली फुटबलको अवस्थासँग पनि जानकार नै छन्। उनीहरु मध्ये धेरैले त नेपाली फुटबल प्रतियोगितामा देखिने अफ्रिकन खेलाडीलाई पनि नियालिरहेकै छन्।
सन् २००५ मा ब्वाइज युनियन क्लबमा केही अफ्रिकन खेलाडी देखिएपछि आउँदो वर्षबाट अरु क्लबमा पनि अफ्रिकन खेलाडी राख्ने प्रचलन बढ्न थालेको थियो। २००९ पछि त विभागीय बाहेकका सबैजसो टिमका केही अफ्रिकन खेलाडी देखिन थालिहाले। शारीरिक रुपमा बलिया र नेपाली खेलाडीको भन्दा भिन्न शैलीले नेपाली लिग फुटबल पनि थप रोचक बनिरहेको थियो।
त्यही निरन्तरताले अहिले पनि नेपालमा २८ जना विदेशी खेलाडीहरु रहेका छन्। यो यकिन संख्या भने होइन। कति विदेशी खेलाडी केही खेलका लागि रकम लिएर मात्र कुनै क्लबबाट खेल्ने हुँदा उनीहरुको यकिन संख्या पाउन समेत मुस्किल देखिन्छ। अफ्रिकामा रहेका एजेन्टमार्फत नेपाली क्लबसँग कुराकानी भएर आउने त्यस्ता कतिपय खेलाडी त कहाँको लिग खेल्ने भन्ने नबुझी पनि एजेन्टमार्फत देश छाडिरहेका हुन्छन्।
एक त भाषाको समस्या अर्को खेल हुँदा मात्र पाइने पैसा, त्यसैले कोरोना भाइरस (कोभिड १९) कारण गरिएको लकडाउनको समयमा नेपालमा रहेका विदेशी खेलाडीहरुको समय थप मुस्किल बनिरहेको छ।
गएको हप्ता अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले २८ विदेशी खेलाडी र प्रशिक्षकलाई राहात बाँड्यो। समस्यामा रहेका विदेशी खेलाडीलाई चामल, तरकारी लगायतका सामग्री बाँडेको एन्फा प्रवक्ता किरण राइले बताए। अहिले एन्फाको सम्पर्कमा २८ जना खेलाडी र प्रशिक्षक आएको पनि प्रवक्ता राईले जानकारी दिए।
कोरोना कहर सुरु भइसक्दा पनि नेपालमा मोफसलको प्रतियोगिता चलिरहेको थियो। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले कोरोना भाइरसको जोखिम भएको हुँदा कुनै पनि खेलकुदका गतिविधि सञ्चालन नगर्नु भनेर आदेश दिएपछि मोफसलका प्रतियोगिताहरु बन्द भएको थियो। त्यसलगतै सरकारले चैत ११ गतेदेखि लकडाउन लगायो। जसले गर्दा विदेशी खेलाडी तत्काल आफ्नो देश फर्किन सकेनन्। मोफसलका प्रतियोगिताहरु चल्नुअघि खेलाडीहरु ए डिभिजन लिगमा नै व्यस्त थिए।
सहिद स्मारक ए डिभिजन लिगको उपाधि पहिलो पटक दिलाएका प्रशिक्षक प्रवेश कटुवालका अनुसार मछिन्द्र क्लबले आफ्ना विदेशी खेलाडीलाई राम्रो बन्दोबस्त गराएर राखेको छ। अहिले मछिन्द्र क्लबमा पिटर सेगुन, अडेलजा सोमिडे र आन्द्रेस निया छन्।
पिटर र सोमिडे नाइजेरियन खेलाडी हुन्। त्यस्तै आन्द्रेस चाहिँ क्यामरुनका हुन्। सोमिडे नयाँबजार बस्छन्। पिटर भैसीँपाटी। त्यस्तै, आन्द्रेस कलंकी। तीनै खेलाडीलाई कुनै समस्या नभएको प्रशिक्षक बताउँछन्। ‘मोफसलका प्रतियोगिता भइरहेको बेला लकडाउन भयो। उनीहरु फर्किन पाएनन्। अहिले पनि उनीहरुलाई क्लबले नै आफ्नै खर्चमा राखिरहेको छ। कुराकानी भइरहेको छ। त्यस्तो समस्या छैन’, प्रशिक्षक कटुवालले सुनाए।
मछिन्द्रले जस्तो सबै क्लबले आफ्नो क्लबबाट खेलेका विदेशी खेलाडीको हेरविचार गर्न सकेको छैन। केही खेलका लागि मात्र रकम लिएर खेल्ने खेलाडीहरु बढी समस्यामा छन्। एन्फाले २८ जना विदेशी खेलाडी र प्रशिक्षक रहेको बताए पनि त्यो यकिन संख्या होइन।
नेपालमा अहिले कति विदेशी फुटबल खेलाडी छन् भन्ने तथ्यांक एन्फासँग माग्दा जवाफ हुन्छ– ‘लकडाउन छ। अफिसमा गएर फाइल पल्टाउनु पर्छ।’
यता, नाम चलेका र सर्वाधिक सफल क्लबका पदाधिकारीहरुलाई पनि आफ्नो क्लबमा आबद्ध भएका विदेशी खेलाडीको संख्या थाहा छैन। कुन देशका कुन कुन खेलाडी राख्नु भएको छ? भनेर प्रश्न गर्दा जवाफ छ, ‘ठ्याक्कै नाम थाहा भएन भोलि फोन गर्नुहोला।’
यसको सिधा अर्थ, अहिले नाम चलेका क्लबले नै आफ्ना विदेशी खेलाडी कहाँ छन् र के गरिरहेका छन्? सोधखोज गरेको छैन। हुन त विदेशी खेलाडीको मात्रै हैन आफ्नो क्लबमा अनुबन्धित भएका नेपाली खेलाडीको पनि चासो गरेको छैन।
अहिलेको समयमा नेपाली खेलाडीमा भन्दा पनि विदेशी खेलाडीलाई साथ र सहयोगको खाँचो बढी देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा विगतका घटनाहरुबाट पनि क्लब र एन्फाले पाठ सिक्न बिर्सिएको छ। यहाँ राष्ट्रिय फुटबल टिमको प्रशिक्षक समेत भएका तथा अहिले न्यु रोड टिम (एनआरटी) क्लबका प्रशिक्षक राजुकाजी शाक्यको कुरा केही सान्दर्भिक छ।
‘खेल सकिएपछि पठाइ हाल्नु पर्छ भन्ने मान्छे म। हामीले उनीहरुलाई कडाइ गर्नु पर्छ। लामो समय नेपालमा राखेर केही हुँदैन। प्रशिक्षक शाक्य थप्छन्, ‘कतिपय खेलाडी त दुई नम्बरे धन्दा गर्ने खालका पनि हुन्छन्। पहिले पनि विदेशी खेलाडीलाई नराम्रो काममा धेरै पटक पक्रिसकेको छ।’
शाक्य प्रशिक्षक रहेको एनआरटीले ए डिभिजन लिगको लागि तीन जना विदेशी प्रशिक्षक आफ्नो क्लबमा अनुबन्धित गरेको थियो। एन्ड्रे थेरिड, जोर्डन जुनियर नो र जुनियर ओगिनियो एनिक गरी तीन क्यामरुनका खेलाडीले ए डिभिजन लिग खेले। तर अहिले यी तीनै जना खेलाडी नेपालमा छैनन्।’
‘हामीले त फर्काइ दियौं। विदेशी खेलाडीलाई यहाँ राखिराख्न जोखिम पनि हुन्छ। त्यही भएर हामीले त्यो जोखिम लिन चाहेनौं’, प्रशिक्षक शाक्यले भने।
अहिल मनाङ मर्स्याङ्दी, थ्री स्टार जस्ता ठूला भनिएका क्लबलाई पनि आफ्नो क्लबमा आबद्ध विदेशी खेलाडीको अवस्था के छ भन्ने जानकारी छैन। एन्फाले आएको सूचनामा समस्यामा परेकालाई खाद्यान्न सहयोग गर्ने काम सुरु गरे पनि क्लबहरु नै भने जिम्मेवारीबाट बेखबर जस्तो बनिरहेका छन्।
मैदान फर्कने हुटहुटी
भुपेन्द्रको यात्रा - माओवादीको कुटाइदेखि सागको स्वर्णसम्म [अन्तर्वार्ता]
एक खेलाडीको पर्खाइ : दुई सय रुपैयाँ र त्यो सपना
संक्रमितलाई तीन तहमा व्यवस्थापन गर्ने कर्णाली प्रदेशको निर्णय आइतबार, जेठ १८, २०७७
८ महिनामा ९८ निकायलाई दिइयो ६ अर्ब कर छुट आइतबार, जेठ १८, २०७७
क्वारेन्टाइनमा खान नपाउँदा गाउँपालिका घेराउ आइतबार, जेठ १८, २०७७
स्पेनी प्रधानमन्त्री सान्चेजले लकडाउनको समय थप गर्न संसदको अनुमति पर्खंदै आइतबार, जेठ १८, २०७७
नेपाल लाइभ समाचार [भिडियो] आइतबार, जेठ १८, २०७७
थप १८ जनामा कोरोना संक्रमण, नेपालमा संक्रमितको संख्या १४ सय ७८ पुग्यो आइतबार, जेठ १८, २०७७
संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा पेश आइतबार, जेठ १८, २०७७